रोममा एउटा विशिष्ट इटालियन बिहानको खाजा Absolut यात्रा
मारुउजेन | | रोम
युरोपको सबैभन्दा सुन्दर र रोचक शहरहरू मध्ये एक रोम हो। यसले इतिहास, कला र ग्यास्ट्रोनमी बिच सब थोरै संयोजन गर्दछ। कुनै पनि यात्रीले यसलाई सूर्योदय देखि राती अबेर सम्म रमाउँदछ, त्यसैले तपाईंले दिनको सुरुवात राम्रो ब्रेकफास्टको साथ गर्नुपर्दछ, रोममा विशिष्ट बिहानको खाजा.
मलाई ब्रेकफास्टहरू मनपर्दछ, जब म यात्रा गर्दै छु र ती दिनको लागि आवश्यक उर्जा अधिभारको प्रतिनिधित्व गर्दछ, स्थानीय स्वादहरूको स्वाद लिने अवसर, मैले पत्ता लगाइरहेको स्थानको एक सानो अंश महसुस गर्न। तर हामी रोममा खाजा कसरी लिन सक्छौं??
1 रोममा खाजा
2 रोममा नास्ता कहाँ गर्ने
सबै खानाहरू इटालीमा महत्त्वपूर्ण छन्, अद्भुत खानाको साथ एउटा देश, त्यसैले हामी राम्रो ब्रेकफास्टको साथ दिन सुरु गर्ने अवसर लिऔं। स्पष्ट रूपमा, नायक कहिल्यै हराइरहेको छैन कफि हो र सबै भन्दा सामान्य र लोकप्रिय मेनूमा केही पेस्ट्री छ। त्यसो भए, रोममा एउटा सामान्य र साधारण बिहानको खाजा कफी र पेस्ट्री हो केहि माखन वा जाम संग, केहि बिस्कुट वा कुकी
तपाईंले यो मेनू रोमीहरूको घरहरूमा वा सुपरमार्केटमा फेला पार्नुहुनेछ, तर बाहिर नास्ता खाँदा, बारमा, अर्को प्रकारको अनुभव हो.
यदि तपाईं केहि फरकको लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने, त्यसोभए एक दिन तपाईंले होटेलको ब्रेकफास्ट छोड्नु पर्छ र बाहिर जानुपर्दछ र अझ विस्तृत रोमी ब्रेकफास्ट खोज्नु पर्छ। यहाँ हामी पहिले नै कफि र यसको साथ मीठो चीजको बारेमा कुरा गर्दैछौं: बमोजा, ​​सिएमबल्ला, मारिटोजो वा कर्नेटो।
कफीको साथ सुरु गरौं। इटालेलीहरू कफी मन पराउँछन् र हामी पनि गर्छौं, त्यसैले बिहानको खाजामा सब भन्दा साधारण विकल्पहरू हुन्: कालो कफी, क्यापुचिनो, कफि दूधको साथ, क्याफे लुन्गो, क्याफे फ्रेड्डो, क्याफे अल भेटरो ... ठीक छ, त्यहाँ सम्पूर्ण शब्दकोष छ त्यसैले हामी थोरै चीजहरू सरलीकृत गरौं। उद्देश्य:
कफि: यो एक सरल एस्प्रेसो हो। यो सानो कपमा आउँदछ, थोरै परिमाणमा र अत्यधिक केंद्रित। तपाईं यसलाई केही दूध वा चिनी थप्न सक्नुहुन्छ।
Macchiato कफी: यो तातो दुध को एक थोपा संग कफी छ।
क्यापुचिनो: बाफ भएको दुधको साथ कफि, धेरै मलाई
लाट्टे मचियाटो: एस्प्रेसो कफीको साथ तातो दुधको लामो गिलास।
क्याफे लुन्गो: यो एस्प्रेसो कपमा सेवा गरिएको हो र यो सबै कुराको बारेमा हो, यो एस्प्रेसो केहि बढी तातो पानीको साथ छ।
इटालियन कफीको यी सबै संस्करणहरू मानकका साथ बनेका छन्: यो एस्प्रेसो कफी। यदि तपाईंलाई यो मनपर्दैन भने, तपाईं जहिले पनि एक ठूलो कपमा अमेरिकनो अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ, जुन बढी पानी खान्छ।
त्यो कफीको सन्दर्भमा, अब राम्रो छ, पेस्ट्रीका सर्तहरूमा हामीसँग धेरै विकल्पहरू छन्। एउटा हो maritozzi, एक मीठो खमीर रोटी जुन रोमको विशेषता हो। किंवदन्तीमा यो छ कि मध्य युगमा मार्च १ मा मारिटोजो एक प्रेमीलाई दिइयो, र त्यो क्रीममा लुकेको त्यहाँ गहना वा औंठी हुनुपर्छ।
यो एक ठूलो तर धेरै हल्का बन हो र प्राय: व्हीप्ड क्रीमले भरिन्छ। धेरै गह्रौं? यो कफीको साथ छ र तपाईं यसलाई साझेदारी गर्न सक्नुहुनेछ, विचारहरू यसलाई प्रयास गर्नु सधैं हो। त्यहाँ इलि मारिटोज्झारो, रोज्किओली क्याफे वा पेस्टेसिरिया रेगोलीमा धेरै राम्रा मारिटोजी छन्। अति उत्तम!
अर्को लोकप्रिय ब्रेकफास्ट बन हो कर्नेटो। वास्तवमा भन्ने हो भने, इटालियन बिहानको खाजा भनेको कर्नेटोको एक क्याप्चिनो कफि मात्र हो।
काकीजन croissant Frances यी बन्स सामान्यतया माखनको सट्टामा तेलले बनेको हुन्छ, त्यसैले उनीहरूसँग हल्का, मीठो स्वाद हुन्छ। एक कर्नेटो आउन सक्छ "सरल" वा भरियो जाम संग, मर्मेलटा, वा क्रीम त्यहाँ स्वस्थ विकल्पहरू छन्, यदि ती तपाईंको लागि अत्यन्त भारी छन् भने, र त्यसपछि त्यहाँ अभिन्न कर्नेट्स छन्, त्यो भन्नु हो, पूर्णमेल फ्राउर्सले बनेको छ र महले भरिएको छ।
तपाईं सबै भन्दा राम्रो कोर्नेटोस कहाँ खाने गर्नुहुन्छ? ठिक छ तपाई कफी पिउन र बस्न कोर्नेटोस खान सक्नुहुन्छ क्याफे चर्मपत्र, पिज्जा डेल रिसोर्जीमेन्टो, वा मा पास्टेरिया बरबेरिनी, टेस्टासिओ छिमेकीमा, वा यो स्थानको अगाडि मात्र, भित्र ट्राम डिपो यदि तपाइँ कफी चाहनुहुन्न भने रोममा सर्वश्रेष्ठ पेस्ट्री हो Panificio Bonci, Prati मा।
यदि रोमन ब्रेकफास्टमा क्रोसन्ट जस्तो केहि छ र फ्रान्सेली सन्तुष्ट हुन्छ भने, यसमा डोनट जस्तो केहि चीज छ र अमेरिकीहरूलाई आकर्षित गर्दछ। यस मामला मा हामी कुरा गर्दैछौं ciambella.
डोनट जस्तै, यो एक हो भुटेको र चिनी स्नान छ कि आटा त्यसैले जब तपाईं यसमा टोक्नुहुन्छ, यो अलि अलि कम छ र तपाईंको मुख क्यान्डीले भरिएको छ। सबै भन्दा राम्रो ciambellas लिनारी मा बेचिन्छ, V Nica निकोला जाबागलिया,।।
बिहानको खाजामा रोमन पेस्ट्रीको अर्को विशिष्ट बन हो बमबोलोन, वा बम, हल्का रंगको फ्राइड बन कस्टर्डले भरियो।
प्रस्ताव अन्य ठेठ बनहरूको साथ जारी रहन्छ जुन केही क्याफेमा बेचिन्छ पेस्ट्रीहरू समावेश छन्। उदाहरणको लागि, रोमको बिचमा यस्तो ठाउँ छ Roscioli क्याफे, यहूदी यहूदी बस्ती र क्याम्पो डे फिओरी बीचमा अवस्थित। जे होस् यो एक दिनको खाजामा महँगो ठाउँ हो, तपाई यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ र यसको डेनिस वा यसको क्रोस्टाटा, स्याउ मिठो केक र स्याउ स्वादिष्ट बनाउन सक्नुहुन्छ।
यति सम्म मिठो, यो छैन? त्यसोभए तपाईं चाहानु हुनेहरूमध्ये एक हो भने केहि नुन तपाईं एक संग कफि संग गर्न सक्नुहुन्छ tramezzini। यी crumbs को साथ सेतो रोटी को त्रिकोणहरु र विभिन्न भरण संग मेयोनेस हो। तिनीहरू कुनै ठूलो सम्झौता हो। होनि, तिनीहरू धेरै राम्रा देखिन्छन्। यदि तपाईं जापान जानुभयो र यस प्रकारको स्यान्डविचको साथ खुशीमा फर्कनुभयो भने, रोममा भएकाहरूले तपाईंलाई अलिक निराश पार्नेछन्। यो दिमागमा राख्नुहोस्
अन्तमा तपाईं सक्नुहुन्छ मिठो र नुन मिसाउनुहोस्aसामान्य ब्रन्च, ढिलो बिहानको खाजा वा चाँडो खाजा। कस्तो अमेरिकी प्रचलन जुन विश्वभरि गएको छ!
रोममा नास्ता कहाँ गर्ने
स्पष्ट रूपमा, ब्रन्च तपाईको साधारण रोमको खाजा होइन तर यो एक प्रचलन छ जुन लोकप्रिय भएको छ र शहरमा यसको सब भन्दा खास बिहानको खाजाको साथ जोडीएको छ। त्यसोभए, हामी नाम लिइरहेका साइटहरूको साथसाथै यी अरूहरूलाई पनि औंल्याउनुहोस्:
मैरीगोल्ड रोम, Via Giovanni da Empoli,) 37) मा पहिलो विकल्प हो। यो एउटा सानो बेकरी भएको एउटा रेस्टुरेन्ट हो जसले घरको रोटी, दालचिनी रोल, जैविक दही, ग्रानोला, पेनकेक्स, अण्डाहरू र अधिक। विशेषता कफी र टीको लामो र रिच सूची थप्नुहोस् र तपाईंसँग उत्तम ब्रन्च छ।
क्याफे मेरेंडा: यो रोमीहरूको बीचमा धेरै लोकप्रिय स्थान हो, पिस्ता भर्नेसँग क्रोसन्टमा विशेषज्ञहरू। ब्रूस पनि राम्रो छ र यसका सबै प्यास्ट्री बाहिर छन्। यो Via Luigi Magrini,6मा छ।
अदुवा: स्वस्थ खाना को तरंग मा छ। यो रेष्टुरेन्ट हो जुन बिहानको खाजामा पनि काम गर्दछ: त्यहाँ स्मूदीहरू, पेनकेक्स, अण्डाहरू र हेम, कोर्नेटोस र कफिहरू छन्। Borgognona मार्फत, -43 46--XNUMX।
नीरो भानिगलिया: चाँडै खुल्छ, बिहान type बजे टाइप गर्नुहोस्। योसँग आधुनिक शैली छ जुन सबै किचनको दृष्टिमा छ। सबै चीज घरेलु हुन्छ र सबै भन्दा राम्रो हो प्यारा विभिन्न स्वादहरु को mousses संग। यो Ostiense र Garbatella, Circonvallazione Ostiense, २०१२ बीच छ।
कोरोमंडल: यो पियाजा नभोनाको नजिक छ र विश्वभरिबाट स्वादिष्ट पेस्ट्रीहरू प्रस्तुत गर्दछ। यो Via di Monte Giordano /०/60१ मा छ।
म्याट: यहाँ तपाई उत्तम कोशिस गर्नुहुनेछ pasticciottos रोम बाट तिनीहरू भाग हुन् विशिष्ट Puglia ब्रेकफास्ट र तिनीहरू यो फूड चेनको मेनूमा छन् जुन रोममा तीन शाखाहरू छन्। एउटा पियाजा बोलोग्नामा छ, अर्को सलुस्तियानोमा र अर्को अफ्रिकी क्वाटरमा। तपाईं स्वादिलो ​​पञ्जेरोटी र फोकसियास पनि प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। Via Lorenzo il Magnífico, २,, Via Venti Settembre, 26१ र Viale Eritrea, १०।।
बार बेनाको: यो ठाउँ महान, सरल र स्वादिष्ट छ। यो सँधै आफैंमा दोहोरिन्छ र यो गर्ने उत्तम चीज क्रोसियन्टहरू हो। यो Vía बेनाको, १ 13 मा छ।
क्याफे डेले कोमारी: तपाईं पट्टीमा वा टेबलमा बस्न छनौट गर्न सक्नुहुनेछ। स्कोन्सको विविधता महान छ र स्टाफ धेरै ध्यान दिएका छन्। यो भ्याटिकनको नजिक छ त्यसैले यो राम्रो ठाउँ हो यदि छिमेकीमा तपाईंको यात्रा सुरु गरेपछि। V Santa Santamaura, २२. सोमबार देखि आइतबार बिहान 22 देखि साँझ7सम्म खुल्ला।
क्याफे नोभेन्टो: योसँग राम्रो चिया कोठा र कुराकानी गर्न धेरै रोमीहरू छन्। यसले दिउँसो सम्म बिहानको खाजा प्रदान गर्दछ। मार्फत डेल गभर्नो भेचीयो, १२।
LI.BE.RA + चाँडै: यो एक प्रारम्भिक खुला रेस्टुरेन्ट ब्रेकफास्ट, खाजा, र आनन्दित घण्टा सेवा गर्दछ। यो पिज्जा नाभोनाको नजिक छ र यो धेरै राम्रो छ। यो Via del Teatro Pace, 41 मा छ।
सेन्ट Eustachio Iil Caffè: यो प्यान्थेन वरपर छ र यसको ताजा ग्राउन्ड कफीको उत्कृष्टताको लागि परिचित छ। पिज्जा डि एस Eustachio, .२. बिहान :82: .० देखि।
यी केवल केहि विकल्पहरू हुन् जसको मजा लिनुहोस् रोममा विशिष्ट इटालियन बिहानको खाजा, तर तीनिहरूले तपाईंलाई निराश पार्दैनन्।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » रोममा एउटा विशिष्ट इटालियन बिहानको खाजा
मलाई यो पृष्ठ मनपर्दछ।
पानिनो र पाणिनी जुन बहुवचन हो, ब्रेकफास्टको अंश हो भन्ने सोच्न यो गल्ती हो। इटालियन ब्रेकफास्टमा केवल मीठो चीजहरू छन्, नुनको केहि छैन। पानिनो कुनै पनि समयमा बेचिन्छ जोहरू पहिले नै घण्टासम्म खाजा खाइसकेका छन् र मध्य बिहानको खाजाको रूपमा भोकाएका छन्।
Livia लाई जवाफ दिनुहोस्
धन्यबाद दिन स्माइलीहरु भन्यो
घर मा, गलतफहमी अधिक को कारण हुन सक्छ
अव्यवस्था र यसैले IKEA Emoticons, एक उपकरण प्रस्तुत गर्दछ
संचार घर मा बुझ्ने सुनिश्चित गर्न।
एन्ड्रोइडको सन्दर्भमा, यो आशा गरिएको छ कि भविष्यका अपडेटहरू हुनेछन्
ठीक उही डिस्प्ले मोड प्रविष्ट गर्नुहोस्। , फ्रान्स,
जर्मनी, इटाली, किबोर्डको तल, तपाईका लागि फरक इमोजी थिमहरू देख्न सक्नुहुनेछ
छनौट गर्नुहोस्। बाँया तिरको घडी प्रतीकले तपाईंलाई भर्खरको देखाउँदछ
जुन तपाईंले प्रयोग गर्नुभयो। स्वत: सुधार पनि उपलब्ध छ, .०
सबैभन्दा आवश्यक भाषाहरूको शब्दकोश, मेरो सेल फोन कीबोर्डहरूमा (मेनू - सेटि Settingsहरू - भाषा र कीबोर्ड) त्यहाँ
सक्षम गर्नुहोस् कि मैले डाउनलोड गरेको एप्लिकेसन पनि प्रयोग भएको छ र यो नै हो, यसले काम गर्‍यो
धन्यवाद दिन स्माइलीलाई जवाफ दिनुहोस्
क्युबामा क्रिसमसको खाना